LOVE ISLAND 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်များ - သတင်း
Love Island 2019: ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးသည်ယခုအချိန်အထိမည်သည်နည်း။
အဆိုပါပြပွဲကောင်းစွာနှင့်အမှန်တကယ်ကျော်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါတို့၏ဆွဲဆောင်မှုနှင့်အနီး - အပေါ် Love Island 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်များ၏ဘဝနှင့်အတူစွဲအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့သန်းပေါင်းများစွာသောသူတို့အားလုံးဟာ Instagram ပေါ်မှာလိုက်ကြပြီးမြန်ဆန်တဲ့ဖက်ရှင်ကုမ္ပဏီတိုင်းအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံတမန်များဖြစ်လာသည်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ် သူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကျွန်းမိတ်ဖက်များနှင့်မလွှဲမရှောင်ကွဲသွားသည်။ အဆိုပါသရုပ်ဆောင်နှင့်၎င်းတို့၏ပြဇာတ်ပေးခြင်းအပေါ်စောင့်ရှောက်သောဆုကြေးဇူးကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ Love Island 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာအခုအချိန်အထိဘာတွေလုပ်နေလဲ။ ဒီဟာကဘာလုပ်နေလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါ။
Amber သည် Greg O'Shea နှင့်အတူ Love Island 2019 ကိုရရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သူမ villa ကတည်းက£ 50k ဆုပိုက်ဆံသုံးခဲ့ပုံရတယ်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @amberrosegill
Love Island အချိန်ကတည်းက Amber ဟာအနိမ့်ဆုံးသို့ရောက်နေခဲ့ပြီးသူမ Loose Women မှာပေါ်လာပြီးပိုက်လိုင်းမှာရေဒီယိုအလုပ်လုပ်နေတယ်လို့ကောလာဟလသတင်းများထွက်နေပါတယ်။ သူမရဲ့ Instagram ဇာတ်လမ်းတွေဟာသူမသွားနိုင်တဲ့အရာများဆိုရင်တော့သူမမှာနောက်ထပ်စီမံကိန်းများစွာရှိသေးသည်။
အမ်ဘာသင် ya သင်သိအများကြီး tweets ကိုမြင်? pic.twitter.com/vyiKKwW6jv
- vic sanusi (@victoriasanusi) စက်တင်ဘာ 2, 2019
Law grad သည် Love Island ဆုရှင် Greg O'Shea အားထိပ်တန်းအိုင်ယာလန်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတခုတွင်ဥပဒေအကြံပေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ဟူသောကောလာဟလကိုလှည့်လိုက်သည်ဟူသောကောလာဟလများရှိခဲ့သည်။ သို့သော် Legal Cheek အရသိရသည် ကုမ္ပဏီနှင့်နီးစပ်သောအရင်းအမြစ် A&L Goodbody က၎င်းသည်မမှန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @gregoshea
Greg သူကဥပဒေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုဆက်လုပ်ချင်နေဆဲဟုဆိုသည် သူသည် Amose နှင့်အတူ Loose Women တွင်ပေါ်လာသည့်အခါသူက“ ဒီတော့ရပ်ဂ်ဘီကကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာပါ။ ရှေ့နေတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အရည်အချင်းပြည့်မီချင်တယ်၊ ဒါကငါ့ဘဝပါပဲ။ ပြီးတော့ဒီရွာလေးမှာငါဝင်ခဲ့ရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်က '
သူသည်အိုင်ယာလန်ရှိသူ၏ဇာတိမြို့တွင်ပြန်လည်နေထိုင်ပြီးရပ်ဂ်ဘီအချိန်ပြည့်သင်တန်းတက်သည်။ သူသည် World Sevens circuit နှင့်အိုလံပစ်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်ပြင်ဆင်နေသည်။
သေချာတာကတော့သေချာတာပေါ့၊ Greg အလုပ်များနေတယ်။ တကယ်တော့အလုပ်များနေလို့သူဟာ Amber ကို TEXT ကစွန့်ပစ်ဖို့အချိန်ပဲရှိတယ်။ Yep the Love Island 2019 ဆုရရှိသူများသည်ငါးပတ်သာကြာခဲ့ပြီး Greg ကသူမအားစာပို့ပြီး၎င်းအားအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Love Island 2019 တွင်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်း Molly-Mae သည်နည်းမျိုးစုံဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်မှာရှင်းနေပါသည်။ သူမသည်သူ့ကိုယ်သူ PrettyLittleThing နှင့်ပေါင် ၅၀၀,၀၀၀ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @prettylittlething
သို့သော်၎င်းအချိန်ကတည်းကသူမရဲ့ 'စုဆောင်းခြင်း' ထဲကပစ္စည်းရှစ်ခုဟာ PrettyLittleThing အပိုင်းများရှိပြီးဖြစ်သည်။ အဆင်မပြေ။
Molly-Mae သည်ဆံပင်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ထပ်ခြောက်ခုပါသဘောတူညီချက်ကိုလည်းရရှိထားသည်။ သူမသည်အမှန်တကယ်အလေးအနက်ထားသည့်££££ nyieun ။
Tommy နှင့် Molly-Mae တို့သည်မကြာမီတွင်ပါဝါစုံတွဲဖြစ်လာသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် Love Island အပြီးတွင်သူမအနေဖြင့်ကြီးမားသောအပေးအယူလုပ်ခြင်းများကြောင့်မဟုတ်ပါ။
Instagram မှတစ်ဆင့် @boohoomanofficial
Tommy Fury ကို BoohooMan အတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်တည်းဖြတ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဖက်ရှင် site ပေါ်တွင်အပိုင်းအစများပုံစံလုပ်နေသည်။
Tommy နှင့် Molly-Mae တို့မှာအတူတကွရှိနေပြီးအတူတကွနေထိုင်ကြသည်။
အိန္ဒိယ Reynolds က
အိန္ဒိယသည် Ovie နှင့်အတူ Love Island 2019 တွင်တတိယနေရာတွင်ရှိသည်။ အဆိုပါ villa မတိုင်မီကအိန္ဒိယသည်သက်သတ်လွတ်စားဖိုမှူးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးယခုသူမသည်သူမအပြည့်အ ၀ သက်သတ်လွတ်စားရန်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သူမဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နေပုံရသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @boohoo
ထို့အပြင်အိန္ဒိယသည် Boohoo အတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်သစ်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။
ကိုယ့် Instagram ပေါ်ငါ့ကို unfollowed သူကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးကြဘူး
Ovie တစ် meme ရှငျဘုရငျကိုဖြစ်လာခဲ့သည် အဆိုပါ villa ၌တည်၏။ Love Island တွင်သူသည်ဤမနက်ခင်းတွင်တီဗီစားဖိုမှူးအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည်။ The Guardian နဲ့ကြီးမားတဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ခဲ့တယ် နှင့် ASOS မော်ဒယ်အဖြစ်ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုထက်မက - သူသည်မိမိအဘနှင့်အတူလုပ်နေတာ !!!
အစီရင်ခံစာများအရ Ovie ၏သဘောတူညီချက်သည်ကိန်းဂဏန်း ၆ ခုနှင့်သူသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏မျက်နှာသွင်ပြင်အသစ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အိန္ဒိယနှင့် Ovie အတူတူနေဆဲဖြစ်သည်။
Villa ပြီးကတည်းက Curtis လိုလားသူသည်သူ၏အကကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ဘီဘီစီ One အတွက်အကြီးမြတ်ဆုံးအကသည်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် Ru Paul's Drag Race UK ရှိသူ၏အစ်ကို AJ Pritchard နှင့်အတူကခုန်ကပ္ပတိန်နှင့် choreographer ဖြစ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @ curtispritchard12
သူသည်နေ့ခင်းဘက်တီဗီအင်တာဗျူးများစွာကိုပြုလုပ်နေသည်။ ဤသည် Morning, Lorraine နှင့် Good Morning Britain တို့ဖြစ်သည်။
Love Island ကထွက်ခွာကတည်းက Maura ဟာသူမအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ သူမသည် Grazia ၏မျက်နှာဖုံးတွင်ရောက်နေပြီးဤမနက်ခင်းတွင်ပြင်းထန်သောဝေဒနာခံစားရသောအဒေါ်ဖြစ်လာခဲ့သည် Ice on Dancing for ကောလာဟလ
Instagram မှတစ်ဆင့် @maurahiggins
Boohoo နှင့် Ann Summers နှစ်ခုလုံးနှင့်ကြီးမားသောစာချုပ်များချုပ်ဆိုထားခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ Maura သည်အမျိုးသမီးအတွင်းခံအမှတ်တံဆိပ် ၆ ခုစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ Ann Summers သူမ၏ကိုယ်ပိုင်လိုင်းပါဝင်သည်သော။ သူသည် Boohoo ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်ဖြစ်ပြီးသူမ၏ခရစ်စမတ်တည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် 'အထူးစီမံကိန်းများ' တို့၏မျက်နှာဖြစ်လိမ့်မည်။
Curtis နှင့် Maura အတူတူနေတုန်းပဲ။
ယူနိုက်တက်တစ်ခွင်ရှိကလပ်များတွင် Anton သည် PAs ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ့ Instagram ကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူကအချိန်အများကြီးပေးနေသလိုပဲ။
မိန်းကလေးတစ် ဦး အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Instagram မှတစ်ဆင့် @anton_danyluk
သူဟာရက်ပေါင်း ၅၀ လုံးအတူတကွလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသူ့မိခင်ဟာလည်းပွဲတွေလုပ်နေပါတယ်။
သူတွေထဲမှာထိပ်ဆုံးကသူလည်းကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းသော TikTok ဗီဒီယိုများဖန်တီးရန်အချိန်ကိုပင်သူရှာဖွေခဲ့သည်။ လူတစ်ယောက်
တစ်စုံတစ် ဦး က pls anton အပေါ်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ် pic.twitter.com/3b0XC5ioDN
- saff? (@ patheticgirl63) စက်တင်ဘာ 2, 2019
@tiktok အကြောင်းအွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ့အရာအားလုံးကိုငါတွေ့ခဲ့ရပြီးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ပြီးဖောင်းပွနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ app ကိုကြိုက်တယ်၊ မင်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအလွယ်တကူလုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံး TikToks နှစ်ခုကိုလုပ်ရတာအရမ်းပျော်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း #ThatShouldBeMe အင်္ဂါရပ်ကိုလိုက်ရန်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများကိုဖန်တီးရန် Green Screen feature ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့ထဲကတစ်ဝက်ပဲ၊ ခင်ဗျားရဲ့ဒုတိယဗီဒီယိုကိုထွက်ကြည့်ဖို့ TikTok ကိုသွားရလိမ့်မယ်၊ မင်းဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ဘူး! သင် app ကို download လုပ်ပြီးထိုတွင်ကျွန်ုပ်နောက်သို့လိုက်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Username မှာ AntonDanyluk! #AD
မျှဝေသည် အန်တိုဒန်လူလူ (@anton_danyluk) PDT မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
အဆိုပါ villa မီ, Belle MUA အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုတွင်သူမသည် Love Island မှထွက်ခွာခဲ့ပြီးသူမသည်သူမ၏ဇာစ်မြစ်များသို့ပြန်သွားခဲ့သည်သတင်းများအရ Belle သည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်မိတ်ကပ်အမျိုးအစားကိုလုပ်ကိုင်နေသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @bellehassan
သူမသည်လည်း Instagram ပေါ်တွင်ကမကထပြုထားသောပို့စ်များကိုမျှမျှတတပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည် Velvo tan၊ ICONIC London makeup နှင့် Bondi Sands tan စသည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုကြော်ငြာခဲ့သည်။
Anton ၏ပါတီပွဲများအားလုံးသည် Belle အတွက်အလွန်များနေပုံရသည် ဒီပွဲဟာပြီးဆုံးပြီးငါးပတ်အကြာမှာပဲဒီစုံတွဲဟာကွဲထွက်သွားခဲ့တာပါ။ Belle သည် 'မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း' ခံရပြီး Anton's ပါတီ၏ဘဝပုံစံတွင်ဒုတိယအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူသည် Craig David နှင့်သူ၏စွဲလမ်းမှုကိုတွေ့ရခဲသည်။ TikTok ဗွီဒီယိုသည်ဤနေရာတွင်များစွာပြောဆိုသည်။
villa ပြီးနောက်နောက်မှနောက်ကွယ်မှထွက်သွားရန်သင်မျှော်လင့်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးသူမှာ Anna ဖြစ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @annavakili_
သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်မျက်ခုံးအကွာအဝေးကိုထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် 'အဓိက' ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆွေးနွေးနေပုံရသည်။ ဒီနေရာကိုစောင့်ကြည့်?!
မည်သူမဆိုယော်ဒန်မြစ်ကိုမြင်ဘူးလား ???? အဆိုပါ villa ကတည်းကသူတိတ်ဆိတ်ခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @jxrdanhames
အလေးအနက်ထားလိုပဲဂျော်ဒန်မြေပေါ်မှာမကျသွားတဲ့တစ်ခုတည်းသောသက်သေကဘယ်အချိန်လဲ လူစီသည်ထိုထူးဆန်းသောဗီဒီယိုကိုတင်ခဲ့သည် 'ငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဂျော်ဒန်ကိုကြည့်ပါ' လို့ပြောနေတဲ့ဆံပင်ညှပ်သမားတစ်ယောက်နဲ့ဂျော်ဒန်ကအဲဒါကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။
ခရစ်ကျွန်းသည် Love Island ရွာမှထွက်ခွာသွားချိန် မှစ၍ ပရဟိတလုပ်ငန်းများစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်ပရဟိတဂေါက်သီးကစားပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး Dogs Trust အတွက်ငွေရှာရန်သူ၏ကိုယ်ပိုင် Love Island ကုန်ပစ္စည်းကို eBay တွင်ရောင်းချခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @christaylorofficial
Harley သည်ခရစ်တေလာနှင့်အတူဗီလာမှထွက်ခွာခဲ့သည်။ သို့သော်ထို အချိန်မှစ၍ Harley နှင့် Chris တို့ကွဲသွားခဲ့သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည်သုံးပတ်အတူတကွခဲ့သညျ။
Instagram မှတစ်ဆင့် @harley_brash
ထို့အပြင်အခြားအရာများသည် Harley သည် Instagram တွင်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူမသည်အညွန့်အနည်းငယ်နှင့်အချို့သောစပွန်ဆာပို့စ်လုပ်ခဲ့တယ်။
Francesca ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အဓိကအရာက Chris နှင့် Cadbury မျက်ခုံးကြော်ငြာကိုဤပြက်လုံးများကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်နှင့် Francesca Cadbury ကြော်ငြာ
ကတင် Love ကျွန်း၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်း တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာ 2, 2019 ရက်တွင်
Villa မတိုင်ခင်သူမ Essex တွင်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဖက်ရှင်ဆိုင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ သူမနောက် Celebs Go Dating တွင်ပါ ၀ င်မည်ဟူသောကောလာဟလများလည်း !!!
Villa မှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မိုက်ကယ်သည်တိုင်းပြည်အထက်နှင့်အောက်နိုက်ကလပ်များတွင် PAs ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်လူတစ် ဦး အားသူ့အား“ စိမ်းလန်းစိုပြေသောအသံ” ရွတ်ဆိုခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @mac_griffiths_
Michael သည်အမေရိကရှိသဲသောင်သောင်ပြင်ပေါ်မှကျော်ကြားသူဖြစ်သည့်အပြင် Couture Club ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သံအမတ်လည်းဖြစ်သည်။
Love Island ပြီးလျှင် Michael နှင့် Joanna အတူတကွပြန်ဆုံမည်ကိုမည်သူမျှသေချာမသိပါ။ ထိုသင်္ဘောသည် Casa Amor မှနပ်ဘလီကိုနမ်းပြီးနောက်တစ်နာရီအကြာတွင် Joanna အားပုံတင်ခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @joannachimonides
Joanna က Instagram ကြော်ငြာကိုတန်ဖိုးရှိစွာနဲ့ဆေးကြောနေသည်။ သူမသည် Starpowa Gummies၊ JD Sports နှင့် Oh Polly ကဲ့သို့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအဖြစ်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
Love Island မတိုင်မီကဗြိတိသျှလေကြောင်းလိုင်း၏လေယာဉ်မန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူသည်ဗီလာမှထွက်ခွာသောအခါသူသည်အလုပ်မှထွက်လိုက်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @amyhartxo
ထိုအချိန်မှစ၍ သူမသည် Loose အမျိုးသမီးများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးတီဗွီဇာတ်လမ်းတွဲအနည်းငယ်သာထွက်ပေါ်မည်ဟုကောလဟာလများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ ကောလာဟလတွေထဲကတစ်ခုကတော့သူမဟာလာမယ့်စီးရီးအတွက်ငါနာမည်ကျော်ကြားနေသူတစ် ဦး ပါ။
ဂျော့ခ်ျဟာ villa ကတည်းကမော်ဒယ်လ်ကိုပြန်သွားခဲ့သည်။ သူ့ကိုစီမံသည် MiLK ပုံစံစီမံခန့်ခွဲမှု။
Instagram မှတစ်ဆင့် @georgerainsofficial
သူသည် Insta spon-con bandwagon တွင်လည်းခုန်တက်ခဲ့သည်။ သူကကျွန်းသူကျွန်းသား Yewande နဲ့သူချိန်းတွေ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟလတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်သူတို့ဟာတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး Instagram's မှာအများကြီးမှတ်ချက်ပေးကြလို့ပါ။ ကောလာဟလမှန်မမှန်ဟုတ်မဟုတ်ကိုတော့အတည်မပြုနိုင်ပါဘူး။
လူစီသည်ဗီလာမှထွက်ခွာသွားပြီးနောက်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာသူမဗိုင်းရပ်စ် meme ဖြစ်လာသည်။ သူမမျက်နှာကိုနှင့်ဆူညံသံအဖြစ်သာဖော်ပြနိုင်သည့်အရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်သောဗီဒီယိုကသူမအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းကသူမရှင်းပြရတာအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။
ကတင် Love ကျွန်း၏သန့်ရှင်းသောဘုရားကျောင်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 28, 2019 ရက်တွင်
Lucie သည်ဆံပင်အမှတ်တံဆိပ်အသစ်ဖြစ်သည့် Peng Hair ဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏ Instagram တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အကြောင်းရေးသားခြင်းပါဝင်သည့်သဘောတူညီချက်အတွက်ပေါင် ၂၀၀,၀၀၀ ပေးခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @lucierosedonlan
Love Island ထွက်ခွာချိန် မှစ၍ ဂျိုးသည် UK ရှိကလပ်များတွင် PAs အချို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @josephgarratt
အိုး၊ ဂျိုးနှင့်လူစီတို့သည်အတူတူပြန်နေကြသည်။ Jucie 2.0 သည်ဤနေရာတွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာသူတို့ပြန်လာပြီလို့အတည်ပြုပြီး Instagram မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဓာတ်ပုံတွေတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်းသူကျွန်းသားအချို့သည် Danny ၏ ၂၂ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုကျင်းပရန် Ibiza သို့ထွက်ခွာသွားကြသည်။ ပါတီသည်အထူးသဖြင့်အတုအယောင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တားမြစ်ခံခဲ့ရသောအနိုင်ရသူများဖြစ်သော Tommy နှင့် Molly-Mae ဖြစ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @itsdannywilliams
ဒန်နီလည်းသူ၏မော်ဒယ်လ်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်ခဲ့သည်။ သူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် FOMO မော်ဒယ်များ။
Jourdan သည် Instagram ရှိဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့် Missy Empire, Oh Polly နှင့် ICONIC London တို့အပါအ ၀ င်အလွန်အမင်းများပြားစွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @jourdanriane
Jourdan သည်သူမ၏ Insta ကိုပထမတန်းစားလေယာဉ်ထိုင်ခုံရှေ့တွင် 'ဝင်ငွေရသမျှကာလပတ်လုံး ... ဂရုမစိုက်ပါ' ဟူသောစာတန်းပါရှိခဲ့သည်။ သူမအတွက်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာစီးပွားရေးမှာရှိမယ့်ဇာတ်ကြောင်းကိုဒန်နီကသူ့ Insta ပုံပြင်ထဲကိုဓာတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ Yikes ။
Love Island 2019 တွင် Arabella ၏အချိန်ကာလမှာတစ်ပတ်တာအားလပ်ရက်သာဖြစ်ပြီးသူမအတွက်တော့အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @arabellachi
သူမက Danny ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးမကြာခင်မှာပဲသူမက villa ကိုစွန့်ခွာပြီးပြီ သူမစီးရီးလေးခုကနေ Wes နယ်လ်ဆင်ချိန်းတွေ့ရဲ့ !!!
Tom Walker က
မော်ရာသည်ပါးစပ်မှန်လျှင် (သူဘယ်တော့မှပြန်ရှင်မည်မဟုတ်) ကိုမော်ကွန်းတိုင်ပြောရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်မည်ဟုမော်ကွန်းတင်သောကြောင့်တွမ်အရိပ်သို့ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @ tom9walker
သူသည်မော်ဒယ်လ်လုပ်ခြင်းကိုယခင်လုပ်သားအဖြစ်ပြန်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်သူ၏အကောင်းဆုံးဘဝကိုသာအားလပ်ရက်နှင့်နေထိုင်နေပုံရသည်။ တရားပါတယ်။
Yewande နေထိုင်သည်။ သူမ၏ Instagram သည် Love Island တွင်မည်မျှကြာကြာမနေရမည်ကိုသင်ကြားပေးသော masterclass တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်စပွန်ဆာပေးသောအကြောင်းအရာနှင့်အင်တာဗျူးများကိုသင်တတ်နိုင်သလောက်ငွေထည့်ဝင်ဆဲဖြစ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @yewande_biala
ဒါပေမယ့်လူတိုင်းသိချင်တာက Yewande ကဂျော့ချ်နဲ့ချိန်းတွေ့တာလား။ မဟုတ်ဘူးလား?!
Instagram မှတစ်ဆင့် @elmapazar
သူမသည် Instagram မှကမကထပြုသည့်ပို့စ်များကို ၀ င်ရောက်ဝယ်ယူပြီးသူမကိုယ်တိုင်စတင်ခဲ့သည် eyelash စီးပွားရေး။
ဗီလာတွင် ၉ ရက်ကြာပြီးနောက်သူသည် 'villa rules များကိုချိုးဖောက်ခြင်း' ကြောင့်ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရသည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @sherif_lanre
ထိုအချိန်မှ စ၍ သူသည်တီရှပ်များကို '' အဲဒါကဘာလဲ '' ဖြင့်စတင်ရောင်းချခဲ့သည်။ သူ၏အဝတ်အစားအမှတ်တံဆိပ်ကို“ လမ်းကြောင်းစီမံကိန်းများ” ဟုခေါ်သည်။ မယုံ။
Instagram မှတစ်ဆင့် @trend_projects
Callum သည် Love Island 2019 ပြိုင်ပွဲဝင်များထဲမှပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်သူဖြစ်သည်။
Instagram မှတစ်ဆင့် @callum_macleod
သူက villa ထွက်ခွာကတည်းကအတော်လေးတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့တယ်။ သူဟာ Instagram ပေါ်ကထူးဆန်းတဲ့ spon con ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးအခြား Love Island ယောက်ျားလေးတွေနဲ့အကြိမ်အနည်းငယ်တွေ့ခဲ့ရတယ်။
• Love Island ပြိုကွဲသွားသည့်ကျိန်စာ - ဘာကြောင့်လဲစုံတွဲတွေအားလုံးဒီရက်စွဲအတိအကျမှာကွဲနေကြတယ်
• Love Islander တစ်ယောက်ချင်းစီအားသင်၏မွေးနေ့ပွဲသို့တက်ရောက်ရန်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း
• ဤတွင် Yewande နှင့် Marcel ကအမတ်များအားသူတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သေအထောက်အထားတွင်ဖော်ပြထားသည်